Iikhosi ezili-10 eziPhambili kunye neziPhambili zeFotohop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iikhosi ezili-10 eziPhambili kunye neziPhambili zeFotohop
Lola ifani | | Idizayini yeMifanekiso, Izixhobo zoYilo, Ukuphefumlelwa, Photoshop
Ukuba ujonga ikhosi ye-Photoshop ekwi-Intanethi elungele iimfuno zakho, awungekhe uphuthelwe yile post Kwi-intanethi, ukubonelelwa ngezifundo kubanzi kakhulu, ke ukufumana eyona nto ikulungeleyo kunokuba yinto ye-odyssey. Ke ngoko, ukuze ungachithi ixesha elininzi ngokuthelekisa, Sikuzisa olu luhlu kunye nezifundo ezili-10 eziphambili kunye neziqhubela phambili zeFotohop Ngaba ukulungele ukufunda? Ewe nikela ingqalelo kwizindululo zethu.
1 Izifundo ezisisiseko zeFotohop
1.1 Intshayelelo kwiAdobe Photoshop
1.2 I-Adobe Photoshop yokuhlela ifoto kunye nokuphinda ungene kwakhona
1.3 I-Adobe Photoshop yaBafoti
1.4 Intshayelelo kwiFotohop yeeMifanekiso
1.5 I-Adobe Photoshop CC: Qalisa ukuQalisa kwiKhosi yeNgcali
1.6 Funda ukuhlela iifoto zakho ngeFotohop CS6
2 Izifundo eziphambili zeFotohop
2.1 IAdobe Photoshop ephambili
2.2 I-Photoshop ePhambili: I-Hihg-End Retouch yeFashoni kunye noBuhle
2.3 I-Photoshop ePhambili yokuhamba komsebenzi ngokukhawuleza
2.4 Ukuphinda ubambe ifoto kwakhona kwiFotohop
Izifundo ezisisiseko zeFotohop
Ukuba ufuna ukuqeqesha kuyilo lwegraphic, iAdobe Photoshop sisiqalo esihle. Isoftware yokuhlela inobungcali kwaye iyaguquguqukaIngasetyenziselwa ukuhlela iifoto kunye nokwenza iziqwenga ukusuka ekuqaleni. Nangona kunjalo, siyazi ukuba ayisisixhobo esilula kwaye ekuqaleni kunokuba yinto eyoyikisayo. Ke, Sikukhethele iikhosi ezi-6 ezisisiseko zeFotohop oko kuya kukunceda uthathe amanyathelo akho okuqala kwinkqubo.
Intshayelelo kwiAdobe Photoshop
6h 54m yeevidiyo
Iikhosi ze-5 ngesantya sakho kunye nokufikelela okungenamda
Ukuhanjiswa kwesatifikethi ekugqibeleni
Intshayelelo kwiAdobe Photoshop Yipakethi yezifundo ezi-5 Ufundiswe nguCarles Marsal. Yintshayelelo enamandla, zizonke zingama-50 izifundo, kodwa iya kukuvumela ukuba ufumane lonke ulwazi oluyimfuneko ukusebenza nesi sixhobo kwinqanaba lobuchule, Nokuba uqala ekuqaleni!
Kwiibhloko ezi-5 uya kufunda uku:
Jikeleza ujongano kwaye uphathe izixhobo eziphambili (ikhosi 1)
Phatha imifanekiso kunye neFotohop (ikhosi 2)
Sebenzisa kunye setha iibhulashi (ikhosi 3)
Yenza ukuphinda uqhubeke yokufota (ikhosi 4)
Sebenza kunye ukukhanya kunye nombala (ikhosi 5)
Elinye lawona manqaku anomtsalane kwikhosi leyo ungayenza ngesantya sakho. Nje ukuba uyithenge, wenauya kuba nokufikelela okungenamkhawulo, ke unokuhlala ubuyela kwizifundo esele zigqityiwe ukucacisa amathandabuzo okanye ukomeleza ulwazi lwakho.
I-Adobe Photoshop yokuhlela ifoto kunye nokuphinda ungene kwakhona
6h 30m yeevidiyo
Iikhosi ezi-5 zijolise ekuthabatheni iifoto kwakhona
Le khosi yaseDomestika, efundiswa ngumfoti oqeqeshiweyo uDaniel Arranz, kunjalo kugxilwe ngakumbi ekufumaneni kwakhona kunye nonyango lwemifanekiso. Ukuba ukuthanda kwakho ukufota yeyona nto ibangele umdla kwi-Photoshop, yile khosi ubuyikhangela!
Iqukethe iibhloko ezi-5, Izifundo ezingama-51 zizonke, apho Uya kufunda ukuqonda ezona zenzo ziluncedo zenkqubo. Ekupheleni kwekhosi uya kuba ufumene ulwazi oluyimfuneko lokuhlela iifoto zakho njengengcali yokwenyani ekuhleleni nasekubhaleni kwakhona. Nangona icacile, iinkcazo ziqala kwezona zisisiseko kwaye zicacile, iyenza ukuba ibe sisiqalo sokuqala kwabahlobo kwiAdobe Photoshop. Ukongeza, ukufikelela akunamkhawulo, ungathatha ixesha lakho ukuqonda umxholo ngamnye kakuhle kwaye uphonononge nanini na ufuna.
I-Adobe Photoshop yaBafoti
9h 21m yeevidiyo
Iindlela zobugcisa zokugqiba iifoto zakho
Kwaye ukuba siqhubeka sithetha ngokufota, le khosi yeOrio Segon yenye indlela elungileyo. Le khosi ityhila, ngendlela elula, indlela Izitshixo zokuposa-ukuvelisa iifoto zakho kwaye ufezekise iziphumo zobungcali. Inezifundo ezingama-47 ezipheleleyo ezihlelwe ngaphakathi Iibhloko ezi-5:
Ibhloko yokuqala apho Inkqubo ithiwe thaca kwaye i ezona zixhobo ziluncedo.
Ibhloko yesibini apho uye ungene kuseto lwe-retouchkugqitywa kwaye kwaziswa kwi Ikhamera eluhlaza.
Ibhloko yesithathu ijolise kuyo iiseshoni zangaphandle.
Ibhloko yesine enikezelwe kuye Umzobo wentengiso.
Kwaye ibhloko yokugqibela kwi Imveliso yokufota.
Njengazo zonke iikhosi zeDomestika, iAdobe Photoshop yabafoti inofikelelo olungenamda. Eyona nto intle kukuba, ngaphandle kokugxila kulwazi lobuchwephesha olunxulumene nenkqubo, ukwazisa amaqhinga asebenzayo noluncedo aya kuphucula ukugqitywa kwemisebenzi yakho. Kancinci kancinci, uya kufumanisa ubuchule obuya kukuvumela ukuba ufumane onke amandla akho okuyila.
Intshayelelo kwiFotohop yeeMifanekiso
6h 52m yeevidiyo
Umzekeliso wedijithali ukusuka ekuqaleni
Ngaba uyakuthanda ukudweba kwaye ufuna ukuqala ukudala imifanekiso yedijithali kwi-Photoshop? bucala ngasekhohlo Iphakethe yezifundo ezi-6 Ufundiswe nguGemma Gould uza kukuphumelela. Ngokuyithatha, ngekhe ukwazi ukucudisa ubuchule bakho ngokupheleleyo, kodwa kunye uya kufumanisa ubuchwephesha kunye nezitayile ezintsha eziza kuba negalelo kuphuhliso lwakho njengomculi.
UGould uza kuqala ngeziseko, ekwazise kwinkqubo kunye nezixhobo eziphambili, kwaye iya kukukhokela kwiprojekthi yokugqibela apho uya kufunda ukuthumela umsebenzi wakho kwamanye amazwe ukuwuprinta kwaye uwusebenzise kwi-intanethi. Ukuba sele uzinikezele ukwenza umzekeliso, le khosi yile ithuba lokuphucula iprofayili yakho yobungcali kwaye ufumane okuninzi kwindalo yakho. Impazamo endiyibonayo kukuba iaudiyo zevidiyo zingesiNgesi, ke ukuba awulwazi kakuhle ulwimi unokuhamba kancinci. Nangona kunjalo, ukwenza imibhalo engezantsi ngesiSpanish akufuneki ube nangxaki.
I-Adobe Photoshop CC: Qalisa ukuQalisa kwiKhosi yeNgcali
4.5 / 5 ukalisho
Yazi inkqubo ngokunzulu
Le khosi yeFotohop, efundiswa nguPhil Ebiner, yiyo yenzelwe ngokukodwa ukuba kwiiyure nje ezili-19 zevidiyo kunye nokuziqhelanisa okuncinci kudlula ukusuka ekuqaleni ukuya kwingcali. Ekuqaleni baya kukubonelela ngezixhobo ukuze ukwazi ukulandela izifundo ngokuchanekileyo kwaye uzinikele lonke ixesha elongezelelweyo olifunayo.
Yiyo ukhetho olufanelekileyo lwabaqalayo kuba idibanisa yonke into oyifunayo yazi le nkqubo ngokunzulu. Eyona nto intle kukuba ngelixa ufunda ukusebenzisa izixhobo eziphambili zesoftware, uya kuyila imizobo yokwenene kunye namaqhekeza kwinethiwekhi yakho yoluntu okanye kwishishini lakho. Ukongeza, uya kuqala ukufota kwakhona.
Funda ukuhlela iifoto zakho ngeFotohop CS6
4.4 / 5 ukalisho
Funda indlela yokwenza i-retouching esisiseko kwi-Photoshop
Le khosi yeAdobe Photoshop yiyo Ndinomdla wokuqalisa kwinkqubo. Izipesheli iinkcazo ezisisiseko nezicacileyo kwizixhobo eziphambili zoyilo lwesoftware kwaye ziya kukuxhobisa ngolwazi oluyimfuneko ukuze uqhubeke ifoto yakho yokuqala yokuphinda ubambe kwakhona, ukusebenzisa ubuchule obahlukeneyo, amacebo okucoca kunye nezitayile. Kwakhona, xa ugqibezela Izifundo ezili-44 ezenza ikhosi oya kuyiphumelela yenza imifanekiso yakho yokuqala kunye nemifanekiso iingcali
Izifundo eziphambili zeFotohop
Ukuba sele uyayazi indlela yokusebenzisa iPhotohop kodwa Ngaba ufuna ukuthatha indawo yokutsiba, yenza ikhosi ehambileyo inokukunceda ukufezekisa loo njongo. Into elungileyo kukuba xa ucacile malunga nezona zinto zisisiseko kwisoftware, ungagxila kuyo funda iindlela ezithile eziphucula umgangatho woyilo lwakho kwaye vumela ukuba ubhetyebhetye ekuphatheni esi sixhobo. Inkqubo ye- Iikhosi ezi-4 eziphambili ze-Photoshop esizibonisa apha ngezantsi zikulungele kakhulu ukuqinisa inkqubo kunye nokuba yingcali yokwenyani.
IAdobe Photoshop ephambili
4h 52m yeevidiyo
Iikhosi ezi-5 zokukusa kwinqanaba elilandelayo
ICarles Marsal ibonelela ngeDomestika a ipakethe yezifundo ezi-5 eziphambili yenzelwe abo sele bethathe ikhosi yokuqala kwiAdobe Photoshop okanye abakwaziyo ukusebenzisa inkqubo. Inkqubo ye- Izifundo ezili-35 Oko kuyabhalwa, ukuqokelela ubuchule obuyimfuneko ukuphucula uyilo lwakho kunye nokuphuhlisa izakhono zakho kwinkqubo. Ezi zifundo ziya kukuvumela:
Jonga i vector amathuba Ifotohop
Funda uku Sebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokudibanisa
Sebenza ngobuchule ngakumbi ngeetekisi
Fumanisa ukubanakho kwe izinto ezikrelekrele ukukunceda yonyuse izinga lomsebenzi wakho
aplicar Iifilitha ezikrelekrele
I-Photoshop ePhambili: I-Hihg-End Retouch yeFashoni kunye noBuhle
4.7 / 5 ukalisho
Ngokukodwa kwi-retouching yefoto
Le khosi yeFotohop, iyafumaneka kwiUndemy, Ijolise kwiingcali zokufota okanye uyilo abalukhangelayo ngokukodwa kwi-retouching yefoto kwaye ngoobani abanomdla ngokukodwa kwi ilizwe lefashoni kunye nobuhle. Eyona nto intle malunga nale khosi kukuba kwiiyure nje ezi-2 iyalungelelanisa yonke into oyifunayo ukuze ufunde indlela yokwenza ukuphinda ubambe ifoto ekumgangatho ophezulu, Enkosi kwiingcaciso ezicacileyo kunye nokudlala iindlela ezahlukeneyo zobuchule. Phakathi kwemixholo yezifundo oza kufumana ulwazi kuyo:
Ukubuyisela kwakhona ulusu
Ukusetyenziswa kwe ukwenziwa kwedijithali
Inkqubo phepha uze utshise
I-Photoshop ePhambili yokuhamba komsebenzi ngokukhawuleza
4.6 / 5 ukalisho
Funda ukusebenza ngokukhawuleza
Usenokuphatha iAdobe Photoshop kwimfezeko, kodwa uziva ngathi uchitha ixesha elininzi kunokuba ungathanda ukuyila iqhekeza ngalinye. Ukuba uziva uchongiwe, yile khosi yakho. Kwizifundo uya kufumana iintlobo ngeentlobo zeengcebiso, ubuchule kunye neengcebiso zokufezekisa ukuhamba ngokukhawuleza komsebenzi, ngaphandle kokuncama umgangatho wamaqhekeza akho. Uya kufunda ukusebenzisa ithuba imisebenzi ezenzekelayo I-Photoshop kwaye uyakufumanisa ukubaluleka kweenkqubo zokonga kunye neziphumo ukuba iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziselwe kamva kwezinye iindawo.
Kwaye ukuba umfutshane ngexesha, ungakhathazeki! Iinkcazo zimfutshane, ukuze ugqibezele ikhosi ngeeyure ezimbalwa. Nokuba uyigqibile uya kuba nokufikelela, ke ungasoloko ubukela iividiyo kwakhona kwaye uphinde izifundo ezibe nzima ngakumbi kuwe.
Ukuphinda ubambe ifoto kwakhona kwiFotohop
Funda ukuphinda ubeke iifoto kwakhona
Kule khosi yeAdobe Photoshop uya kufumanisa yonke into oyifunayo ukuze ubambe iingcali kwimifanekiso yakho. Ubuchule obuphuhliswe kwikhosi bujolise kubo ukufezekisa ukuchukumisa kwendaloUkuhlonipha ulusu kunye nokuvumela ukukhula kwemisebenzi esemgangathweni yokufota. Yenziwe izifundo ezintathu eyahlukileyo apho uya kufunda khona:
Ukubuyisela kwakhona ubuso nemizimba
Sebenza kunye ukukhanya kunye nombala
Sebenza kunye umahluko kunye nomnyama nomhlophe
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Iikhosi ezili-10 eziPhambili kunye neziPhambili zeFotohop
Indlela yokujoyina okanye ukujoyina iPDF kwi-intanethi
Iinkqubo zokwenza iividiyo